Weekly Promotions - Search
ပရိုမိုးရှင်း မှ Busan Fish Cake
လူငယ်လေးတွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ စံရိပ်ငြိမ်းဂမုန်းပွင့်က Busan Fish Cake ရဲ့ 20% Discount Busan Fish Cake ဆိုင်မှာဆိုရင်...
ပရိုမိုးရှင်း မှ Thai Pot BBQ and Hotpot
“Best BBQ Experience in Town” ဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်း ရန်ကုန်မြို့ထဲက လူကြီး လူငယ်မရွေးသဘောကျ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့...
ပရိုမိုးရှင်း မှ TOM N TOMS Coffee Myanmar
မကြာသေးမီကပဲ ကော်ဖီချစ်သူများကြား တစ်ဟုန်ထိုး ရေပန်းစားလာသလို ကိုရီးယား Brand တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့...
ပရိုမိုးရှင်း မှ KAIYO Japanese Restaurants & Sushi Bar
ဂျပန်စာ စစ်စစ်ကို စားဖို့ ဂျပန်မြေကို တကူးတက သွားစရာမလိုတော့ပါဘူး… အမှန်တော့ ဂျပန်စာလို့...
Spend 5000Ks and above and get 20% Discount
ပစ္စည်းမှ Busan Fish Cake ဆိုင်
Are You Korean Food Lover? I haveabig news for you, by using B&F Club Card you will get 20% For Fish Cake Only. Busan's fish cake is the most popular street food in Korea. Address: 4th Floor,417A.Gamone Pwint Shopping Mall Insein Road,San Yeik...
3500Ks worth fried Golden Triangle present at The Secret Home restaurant, Bagan
ပစ္စည်းမှ The Secret Home ဆိုင်
A nice, clean and tasty Burmese cuisine in Bagan. Not just Burmese traditional especially A Nyar (Middle area of Myanmar) food but the restaurant offers Chinese and European food as well. As for Clubcard members, you will be treatedaset of fried golden...
20% Discount for all items at Mya Thint Sar gift shop, Bagan
ပစ္စည်းမှ Mya Thint Sar ဆိုင်
Get 20% Discount For Any Items!If you want Myanmar Traditional things like Lacquerware, Woodern or Clay scluptures and other handmade traditional things with fair price and good quality product.To enjoy 20% Discount, please show B&F Club Card before...
20% Discount at Bagan House (Lacquerware)
ပစ္စည်းမှ Bagan House ဆိုင်
ပုဂံမြို့မှာရှိတဲ့ Bagan House (Lacquerware) မှာဆိုရင်တော့ ဘာပဲဝယ်ဝယ် B&F Club Card နဲ့ဝယ်ယူရင်တော့ 20% Discount နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်….Bagan...
ပစ္စည်းမှ Western Park Restaurants ဆိုင်
🍗Western Park ဆိုင်ရဲ့ နူးနူးညံ့ညံ့ စပါယ်ရှယ် ဘဲကင်ကို မြည်းစမ်းကြည့်ဖူးပြီးပြီလား?😉ဘဲကင်တင်မကဘူးနော်…...
5% Discount on your Express Bus Ticket
ပစ္စည်းမှ BNF Express ဆိုင်
Buy express Bus tickets at BNF Express and get 5% Discount every time when you travel.Eligible express bus line are JJ Express, Famous Traveller, Mandalar Min, Elite Express and many more. How to get 5% Discount on your travel ticket?Simply tell your...
20% Discount For All Item
ပစ္စည်းမှ Ruby Jewellery ဆိုင်
လူအများကြားထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ရှိရင်းစွဲ အလှပတရားကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေဖို့ ၊ ပွဲလယ်မှာတင့်စေဖို့အတွက်...
ပစ္စည်းမှ Jetstart ဆိုင်
Up to 5% Off Jetstar Airlines Flight Tickets - buy at Green Myanmar Travel & Tours DetailsGet exclusive5$ Discount for Return Way and 3$ Discount for One Way on original price of Jetstar Airlines flight tickets via Green Myanmar Travel and Tours....
12% Off For Room Charges
ပစ္စည်းမှ JL Lodge Ngwe Saung ဆိုင်
လှပသာယာတဲ့ တောင်ကုန်လေးပေါ်က ငွေဆောင်ကမ်းခြေကို ကြည့်ရူ့ရှင်း အေးအေးချမ်းချမ်း သာသာယာယာနဲ့ ...
ပစ္စည်းမှ Hotel Magic Mandalay ဆိုင်
မန္တလေးမြို့ကြီးကို ရောက်ရှိလို့ တည်းခိုရာနေရာရှာတဲ့ အခါ Hotel Magic Mandalay ကိုသာ ရွေးချယ်ပါ။ B&F Club Card နဲ့ဆိုရင်တော့...
ပစ္စည်းမှ Thai Pot BBQ and Hotpot ဆိုင်
Have you ever had “The Best BBQ Experience in Town”?Here we have Thai Pot BBQ Buffet to make your day fun with 15% discount on total bill.There are many BBQ shop in town but THAI POT is different. There’s various kind of Shrimp, Crab, Squid, Pork,...
Above 15,000Ks Get 15% Discount
ပစ္စည်းမှ Pizza Hut Myanmar ဆိုင်
ဘာပဲစားစား (15)% Discount ရရှိမယ့်ဆိုင်တွေကတော့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး Pizza ဆိုင်ခွဲတိုင်းမှာရရှိနိုင်ပြီးတော့...